Wararka - Blechexpo / Schweisstec 2019
R rullaluistemadka shekeysan
Isku xirayaasha Degdega ah ee Biyaha & Gaas
Sunweld —- Hoolka 7-7009
Sidii la filayay, carwadii 14-aad ee Blechexpo ee ganacsiga caalamiga ah ee loogu talagalay biraha shaqeeya, oo ay weheliso 7th Schweisstec carwada caalamiga ah ee carwada ku biirista tikniyoolajiyadda, waxay ahayd mid soosaar warshadeed oo si guul leh loogu xiray 1498 bandhigayaal ka socda 36 dal. 41,152 booqdayaal ka socda wadar ahaan 113 dal ayaa ka faa'iideystay labada carwo ee ganacsiga, taas oo inta ka horeysana u korodhay 108,000 oo mitir murabac oo carwada bannaankeeda ah, si ay naftooda u soo saaraan taariikhda la xiriirta waraaqaha birta, tuubbada iyo qaabeynta astaamaha, iyo sidoo kale jarista, ku biirista, sameynta iyo farsamooyinka alxanka, laga bilaabo 5-ta illaa 7-da Nofeembar, 2019.
Jiangyin Xinlian Alxanka Qalabka Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2006 waxayna ku taalaa Wuxi, Jiangsu, oo leh goob juquraafi ahaan ka sarraysa iyo gaadiid ku habboon. Shirkaddan ayaa baaxadeedu dhan tahay 7,000 oo mitir murabac ah oo ay hadda u shaqeeyaan in ka badan 100 qof. Waa shirkad tiknoolajiyad sare oo isku dhafan wax soo saar, cilmi baaris iyo horumarin, iib iyo adeeg.
Tan iyo aasaaskii shirkadda Xinlian alxanka (Brand Sunweld), waxaan ku takhasusnay soo saarista taxane kala duwan oo ah MIG / MAG tooxooyin, Tooshka alxanka ee TIG, Tooshka goynta plasma-ha iyo qaybaha dayactirka. Waxyaabahayagu waxay dhaafeen shahaadada CE, shahaadada RoHS, noocyo dhammeystiran iyo qeexitaanno, tayo sare iyo qiime tartan leh. Iyada oo tayo sare leh iyo adeeg kaamil ah, shirkaddu waxay ku guuleysatay aqoonsi ballaadhan iyo ammaan loo dhan yahay oo ka timid macaamiisha. Wax soo saarkooda si wanaagsan ayaa loogu iibiyaa in ka badan 50 dal iyo gobol, waxayna abuurtay iskaashi istiraatiijiyadeed oo muddo dheer ah shirkado badan oo caan ah.
Shirkaddu had iyo jeer waxay hirgelisaa mabaadi'da "tayada ugu horreysa, marka hore macmiilka", si adag ayay u xakameysaa tayada, waxay u hoggaansan tahay jihada istiraatiijiyadeed ee horumarka ee "ku badbaada tayada, kuna kobcisa hal-abuurnimo", shiraac oo horay u sii socotaa, macaamiil badana u keentaa baaxadda wax soo saarka iyo khibradda isticmaale ee ka sii wanaagsan.
"Raadinta heer sare waa mid aan dhammaad lahayn, oo lagu hormarayo waqtiyada lana abuurayo mustaqbalka", waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyno si aan wadajir ugu hormarno xaalad guul-guul ah!
Kooxdayadu waxay joogi doonaan istaagga Hall 7-7009, halkaas oo noocyo kala duwan oo MIG TIG Plasma ah laga heli karo. Ku soo dhawow booqashadaada!